October 2020 | Umbele
Isikhulu esiphezulu eMTN uMnu uRalph Mupita
U-MTN uthi iCOVID-19 iyilethele okuhle nokubi
INKAMPANI yezokuxhumana kuleli iMTN ikhiphe umbiko wekota yesithathu ephele ngoSepthemba 30; lapho iveze khona ukuthi isibalo samakhasimende ayo sikhule ngamakhasimende awu-12 million, safinyelela ku-273 million emazweni awu-21 esebenza kuwona.
UMnu uSiphamandla Mkhwanazi usomnotho waseFNB ehlaziya isabelomali
Izinyunyana zishaya amakhala ngesabelomali samaphakathi nonyaka
Izinyunyana zithi yimbudane ukuthi kunezingxoxo eziqhubekayo phakathi kwazo nohulumeni mayelana nokungayinyusi imiholo yezisebenzi zikahulumeni. USLINDILE KHANYILE uyabika
AZIKHO izingxoxo eziqhubekayo phakathi kukahulumeni nezinyunyana mayelana nokumisa ukunyusa imiholo yezisebenzi zikahulumeni futhi ngeke zibe khona uhulumeni engakasifezi sonke isivumelwano sokunyuswa kwemiholo esasayinwa ngo-2018.
UNksz uVhongani Shumba umnikazi we-mi butter
Oneminyaka eqala amabhizinisi, abuye awashiye phakathi useze walithola alizwa ngaphakathi njengoba manje ibhotela lakhe elixubile selitholakala ezweni lonke. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
WAQALA enebhizinisi elihlanganisa abantu abasuke befuna umaqondana nokwathi maduze emva kwaloko waqala elokuba nomgqomo emotweni ngoba ebona isidingo salo ngesikhathi indodana yakhe isencane.
UNgqongqoshe uMnu uTito Mboweni wethule iMedium-term Budget Policy Statement
Izinselelo iNingizimu Afrika ebhekene nazo azisho ukuthi izwe kumele liqhubeke nokucwila ezikweletini. USLINDILE KHANYILE uyabika
ININGIZIMU Afrika ilindele ukuthi imali eyikweletayo inyuke isuka kuR4.1 trillion ngo-2020/21 ifinyelele kuR5.5 trillion ngo-2023/24, nokuzoba ngu-95% wenani lo mnotho noma i-gross domestic product (iGDP), lokhu kushiwo wuNgqongqoshe wezeziMali uMnu uTito Mboweni.
Ulinakekela kanjani ithalente lakho njengebhizinisi, kuloba uNtokozo Biyela
IFA leziwula lidliwa yizihlakaniphi. Sisho njalo isiZulu. Leli yiqiniso elingephikwe uma kuziwa kumathalente abantu abanawo abangakwazi ukuwaphathisa okwebhizinisi.
Impicabadala ngobuthaphuthaphu bokuthengwa kwamaqembu kwiPSL, kuloba uSiyabonga Hadebe
NJENGOBA isikhathi siya sihamba, abantu abaningi bayambuleleka ngobudlelwano phakathi kwebhola nemigomongqangi yezomnotho. Lo budlelwano bungaba obuqondile noma obuphambene nehlombe kodwa abulawuleki. Ngenxa yaloko, noma ngabe uwusomnotho noma umbhali wezemidlalo, akulula ukuqonda noma ukuqagula ngezezimali ebholeni.
UMengameli uCyril Ramaphosa usola amabhange ngokugodola nemali
Ngabe kukhona okuhlukile amabhange azokwenza ukusabela kwikhwelo likaMengameli uCyril Ramaphosa okhale ngokuthi incane imali asabolekise ngayo ukufukula amabhizinisi akhahlanyezwe yiCOVID-19? USLINDILE KHANYILE uyabika
ASHONA ezintangeni amabhange amathathu kwamane amakhulu ezweni uma ebuzwa ukuthi yini azoyenza ukuze kwande isibalo samabhizinisi ashaywe yi-COVID-19?
UNgqongqoshe wezeziMali uMnu uTito Mboweni kulindeleke ukuthi aqhubeke ngonyawo lokonga
Kusasa uNgqongqoshe wezeziMali uMnu uTito Mboweni uzokwethula isabelomali saphakathi nonyaka, iMedium-Term Budget Policy Statement. Singalindelani kulesi sabelomali? USLINDILE KHANYILE uyabika
BEKUFANELE ngabe isabelomali sizokhombisa ukuzinikela kweNingizimu Afrika ekufukuleni umnotho ngokuthi kube khona imali ebhekile ezokwabelwa ukuthuthukisa ingqalasizinda kodwa kunaloko uNgqongqoshe wezeZimali uMnu uTito Mboweni uzoqhubeka nokubopha izifociya.
UMnu uZamani Letjane, isikhulu esiphezulu se-Akani Retirement Fund Administrators
Ukhulise isikhwama sempesheni sisuka kuR1.4 billion, wasibeka kuR19.5 billion kanti kusasa uzokwethula ihhotela lomntakabani eliwuR650 million. Le nkakha ixoxe noSLINDILE KHANYILE ngohambo lwayo emkhakheni abampisholo abangandile kuwona
EKHULA wayeqaphela umalume wakhe oyedwa owayengafiki njalo ekhaya kodwa uma ekhona wayesuke eswenke econsa futhi ehamba ngohuntshu lwemoto nokwakumchaza kanti nomkhulu wakhe wayemgqugquzela ukuthi akaxoxe nalo malume ezokwazi ukuthi wenzani.
I-TRANSNET izoqinisa isandla endleleni okuthengwa ngayo impahla ukukhuculula ukumoshwa kwemali njengoba ithi kunoR114.3 billion omoshekile kule minyaka edlule
ABAKWA-TRANSNET bathi baqinise ukusebenzisana kwabo nabengalo yomthetho nezinye izinhlaka ezifanele ukusheshisa uhlelo lokubuyekeza ukuthengwa kwezinto, okwavela kwikhomishana ephenya ngokuqhwagwa kombuso. Loku kubandakanya nokuthengwa kwamaguzu awu-1 064.
NGENKATHI sethula Umbele ngenyanga edlule sabika ukuthi kuyohamba kuhambe kufike isikhathi lapho kuzodingeka mfundi othandekayo ukuthi uzikhokhele ezinye zezindaba esikuphakela zona. Njengeziko lezindaba siyibhizinisi njengawo wonke amanye amabhizinisi, nokusho ukuthi … Read More
UNksz uLindelwa Mhlamvu umnikazi weThema Skincare
Othaka amakhambi esiNtu ngemuva kokuwahlola ngezindlela yesayensi bese ewasonga isilungu uthi okuvela emhlabathini kuyaphilisa. Uxoxe noLANGA KHANYILE
MIHLA namalanga eNingizimu Afrika, e-Afrika jikelele, naphesheya ezindaweni ezigcwele abantu abadabuka e-Afrika, kuculwa iculo elilodwa – iculo elithi azibuye emasisweni.
USlindile Khanyile uxoxa noMnu u-Owen Nkomo ukuhlaziya uhlaka lokuvuselela umnotho olwethulwe wuMengameli Cyril Ramaphosa
Isikole sase-Edinvest Schools iCanaan College eMlaza
Baphokophele ukwakha izikole ezizimele emalokishini aseNingizimu Afrika njengoba sebezovula esesibili emva kokwakha esokuqala eMlaza. Bathembeni njengoba umnotho uwile? USLINDILE KHANYILE uyabika
NGONYAKA ozayo inkampani yabantu abamnyama eyakha izikole ezizimele, i-Edinvest Schools, izovula isikole sayo sesibili esizimele i-Etham College eHilton, maphakathi neKwaZulu-Natali.
UNkk uNontuthuko Mbimbi uyi-radiographer emajukujukwini akobantu
KUYINTO ejwayelekile ezindaweni zabantu abamnyama ukuthola izindawo zodokotela abazimele yonke indawo kodwa akuvamile ukuthi kube nendawo egxile ekusizeni labo abasuke bedinga ukuhlolwa ngemishini yeX-ray.
I-Pietermaritzburg Economic Justice and Dignity Group ikhiphe umbiko ngamanani okudla
Kuyagcina kule nyanga ukukhokhwa kukathasi ezibonelelweni zezingane nezaguga njengoba isikhathi esasinqunyelwe zona sesiphelile. Loku kuthiwa kuzozwela njengoba amanani okudla emba eqolo. USLINDILE KHANYILE uyabika
UKUQEDWA kukachatha obufakwe ezibonelelweni zezingane nezabantu abadala kuzokwenza izigidi zabantu zibulawe yindlala futhi kuzolimaza kakhulu abantu besifazane, okuyibona abahlomula kakhulu ngalezi zibonelelo.
UMnu uSandile Zungu inkunzi ekade zaziyibovula
Ususe igidigidi kuvela ukuthi uthenge iqembu lePSL AmaZulu. UMnu uSandile Zungu uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngezinhlelo zakhe ngoSuthu nangohambo lwakhe lokuba wusomabhizinisi
KUTHIWA kukabilli ngomuntu ofaka imali ebholeni. Okokuqala kuthiwa wumuntu osuke engaqondi empeleni ibhola liyayidla imali, kunokuyingenisa; ngaphandle uma unenqwaba yabaxhasi futhi kuyiqembu elithola imiphumela emihle.